ကြှနျုပျတို့အကွောငျး > အဆိုပါ WCG ၏နောက်ခံသမိုင်း > Rapture အယူဝါဒ
Die von manchen Christen vertretene «Entrückungslehre» beschäftigt sich mit dem, was bei Jesu Wiederkehr – beim «Zweiten Kommen», wie es meist genannt wird – mit der Kirche geschieht. Die Lehre besagt, dass die Gläubigen eine Art Himmelfahrt erleben; dass sie hingerückt werden, Christus entgegen, irgendwann bei seiner Wiederkehr in Herrlichkeit. Als Belegstelle dient den Entrückungsgläubigen im Wesentlichen eine einzige Passage: «Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zum Kommen des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrigbleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein allezeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander» (1. သက်သာလောနိတ်မြို့ 4,15-17) ။
အဆိုပါပီတိအယူဝါဒသည် ၁၈၃၀ ပြည့်နှစ်ခန့်တွင်ဂျွန်နယ်လ်ဆင်ဒါဘီအမည်ရှိသူတစ် ဦး ထံပြန်သွားပုံရသည်။ သူကဒုတိယအချိန်ကိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တယ်။ ဦး စွာ၊ ဆင်းရဲဒုက္ခမခံရမီခရစ်တော်သည်သူတော်စင်များထံသို့မလာဘဲသူနှင့်အတူဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်။ ဆင်းရဲဒုက္ခခံရပြီးနောက်သူသည်သူတို့နှင့်အတူကမ္ဘာမြေသို့ပြန်လာပြီးမှသာဒါဘီသည်ဒုတိယမြောက်စစ်မှန်ခြင်း၊ ခရစ်တော်၏ဘုန်းတန်ခိုးအာနုဘော်နှင့်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။
ကျွန်တော်တို 1. Thessalonicher betrachten, scheint der Apostel Paulus nur zu sagen, dass beim Ertönen der «Posaune Gottes» die Toten, die in Christus gestorben sind, zuerst auferstehen und mit den noch lebenden Gläubigen gemeinsam auffahren werden «auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen». Dass die ganze Kirche – oder ein Teil der Kirche – vor, während oder nach der Bedrängnis entrückt oder an einen anderen Ort versetzt werden soll, davon ist nicht die Rede.
Matthäus scheint von einem ähnlichen Ereignis zu sprechen: «Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren, und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit grosser Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen, und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum andern» (Matthäus 24,29-31) ။
မMatthewဲ (၀ ါ) သခင်ယေရှုကသူတော်စင်များကို“ ထိုကာလ၏ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနောက်မှသိမ်းဆည်းခြင်းငှာ၎င်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၊ စုရုံးခြင်း (သို့) သင်အလိုရှိပါကသခင်ယေရှုဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းသည်အနှစ်ချုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းချက်များမှဖတ်ရှုရလျှင်အယူဝါဒများပါ ၀ င်သောခြားနားချက်များကိုနားလည်ရန်ခက်ခဲသည်။
ဤအကြောင်းကြောင့်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောကျမ်းချက်များကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့် ဆို၍ ကောက်ယူထားပြီးအထူးဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးထားသည်။ ဤအခန်းငယ်များကသခင်ယေရှုဘုန်းအသရေပြန်လည်ကြွလာသောအခါသေလွန်သူများသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာကြပြီးအသက်ရှင်ကျန်သူများနှင့်အတူတကွပေါင်းစည်းလိမ့်မည်ဟုရိုးရှင်းစွာဆိုထားသည်။
သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာခြင်းမတိုင်မှီ၊ ၀ င်ရောက်ချိန်နှင့်အပြီး၌အသင်းတော်သည်မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုမေးခွန်းကကျမ်းစာ၌အဓိကဖွင့်ထားဆဲဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ သမ္မာကျမ်းစာသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ၊ တစ်ယူသန်ဆန်ဆန်ပြောသောအရာများသည်သခင်ယေရှုသည်ကမ္ဘာကြီးကိုတရားစီရင်ခြင်းအားဖြင့်ဘုန်းတော်ဖြင့်ပြန်လည်ကြွလာတော်မူမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သေချာစွာသိထားကြသည်။ သစ္စာစောင့်သောသူသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်။ ၊ သူနှင့်အတူဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းမည်။